Ji'ooloojii - Wikipedia
(Geology irra kan qajeele)
Ji'ooloojii (Greek irra kan dhufe - ge jechuun "Planeta kenya (Earth)"; fi logos immo "bekkumsa") kunii immo science yoo ta'u kan qo'atuus wa'ee kutta planeta kenya kan "solid" ta'anii, qabenya, kuttalle, fakkii, seena fi ademsaa fakki isaa (lafa) jijjiru qo'atta. Kunii immo Earth science kessa tokko dha. Geologistotni ganna planeta kenya hamam akka ta'ee itti dhaqabaniru, kunis wagga billiona 4.6 (4.6x109) dha. Kan qofaa osoo hin ta'in geologistonii, lithospheren lafa kan crust ofii kessa qabu akka tectonic platiit kan caccabe yoo ta'u plate kunii immo rheic irra gubba mantle (asthenosphere) irra kan ademmu yoo ta'u kunii immo ademsaa walumma galatti plate tectonics jedhamun. Kana malee geologiston qabenya planetta kenya akka petroleum fi coal, akkasumas sibilotta akka iron, copper fi uranium barbadu fi qussachu irratti hojjatu. Qabenyi birra economyiif barbadamu [[[gemstone]] yoo ta'u, kan birra immo albudotta bayye akka asbestos, perlite, mica, phosphates, zeolites, clay, pumice, quartz, fi silica, akkasumas elementotta akka sulfur, chlorine, fi helium dha.
Planetary geology (kan yerro tokko tokko Astrogeology jedhamu) kunii immo yoo yaddi geology kunii immo yerro planetotta biraa irratti tajajillamu dha. Haa ta'u malee kan qofaa osoo hin ta'in planetotta tokko tokko maqaan adda ta'e birratti tajajallima, fakkena qo'ano geology Batti yerro tokko tokko selenology kan jedhamu yoo ta'u qo'anoon geology Mars immo areology jedhamu, fakkeni birra bayeen ni jirra.
Maqaan "geology" jedhamu kuni kan yerro duraaf tajajilame namicha Jean-André Deluc jedhamun bara 1778 kessatti yoo ta'u kan akka yerro hunda tajajilamu danda'u kan godhe immo namich Horace-Bénédict de Saussure jedhamuun bara 1779 kessatti. Qo'annon geology kuni Encyclopedia Britannica's sadaffa kan bara 1797 midhafame dhumatte irratti kan hin argamne yoo ta'u, garuu afurrafa kan bara 1809 midhafame xumurame irratti barrefami geology dheranii galma'e ture. An older meaning of the word was first used by Richard de Bury to distinguish between earthly and theological jurisprudence.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji%27ooloojii&oldid=24038" irraa kan fudhatame
Last edited on 16 Adooleessa 2014, at 16:21
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 16 Adooleessa 2014, sa'aa 16:21 irratti.